Umbuso Wami udinga labo abethembekile, abangazenzisi, futhi abangakhohlisi. Ngabe abantu abaqotho nabethembekile akubona abangathandeki emhlabeni? Mina ngiphambana nalokho nje. Kuvumelekile ukuba abantu abethembekile beze Kimi; ngiyathokoza ngalolu hlobo lomuntu. Yilokhu kanye ukulunga Kwami. Abanye abantu abazi; abakwazi ukuzwa umsebenzi woMoya oNgcwele futhi abakwazi ukuqonda intando Yami. Abakwazi ukubona ngokucacile umndeni wabo nezimo ezibazungezile, benza izinto ngobumpumputhe bese belahlekelwa ngamathuba amaningi omusa. Zonke izikhathi bayazisola ngezenzo zabo futhi lapho bahlangana nodaba, baphinde futhi bangakwazi ukulubona ngokucacile. Kwezinye izikhathi bayakwazi ukwethembela kuNkulunkulu ukuze basebenzele ukunqoba, kodwa lapho behlangana nohlobo lodaba olufanayo emva kwalokho, ukugula kuyavuka, bese bengakwazi ukuqonda intando Yami. Kodwa angizibheki lezi zinto, futhi angiwakhumbuli amacala enu. Kunalokho, ngifuna ukunisindisa kuleli zwe elingenasimilo futhi nginivumele ukuba nivuselele izimpilo zenu. Nginixolele njalo. Nokho, manje yisinyathelo esibucayi. Anikwazi ukuqhubeka nokudideka futhi anikwazi ukuqhubeka nokuphikelela phambili kanjalo—nihamba nibuye nime. Niyokwazi ukufika nini esiphethweni? Kufanele nenze ngakho konke ukugijima niqonde emgqeni wokuqeda ngaphandle kokuma. Ningayekethisi ngesikhathi esibucayi kakhulu, qondani phambili ngesibindi, futhi idili elikhulu liphambi kwenu. Gqokani masinyane izingubo zenu zomshado nemijiva yokulunga bese ningena esidlweni sakusihlwa somshado kaKristu; thokozelani ukuthula komndeni kuze kube phakade! Ngeke nisacindezeleka, nibe lusizi nibubula njengakuqala. Ngaleso sikhathi konke kuyobe sekunyamalele njengentuthu futhi ukuphila kukaJesu ovukile kuphela kuyoba namandla kuwe. Kuyoba yithempeli elihlanziwe futhi lahlanjululwa ngaphakathi futhi ukuphila kokuvuka okuzuzile kuyohlala kuwe phakade naphakade!